~ Witch83၏ စိတ်ကူးကမ္ဘာ ~: March 2009
Girl Friends' Week အတွက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပို့ ပေးတဲ့ Forward mail တစ်စောင်ကရတာပါ။ သဘောကျမိလို့ ဘာသာပြန်လိုက်တာပါ။ original mail ထဲက pictures တွေလည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
လူတိုင်း အကောင်းမြင်ဝါဒကို ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေ။
မနက် မနက် နောင်တတွေနဲ့ အိပ်ရာကနိုးထဖို့ ဘဝဟာ သိပ်ကိုတိုတောင်းလွန်းပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သင့်အပေါ်ကောင်းတဲ့သူတွေကို ချစ်ခင်ပါ။ တန်ဖိုးထားပါ။
သင့်ကို သဘောမကျတဲ့သူတွေကိုလည်း ချစ်ခင်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သင့်ဘက်က ချစ်လို့ ရနေလို့ ပါ။
ဖြစ်သမျှအကြောင်းတရားတိုင်းမှာ အကျိုးတရားတစ်ခုစီ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သင်ယုံကြည်လိုက်ပါ။ ဖြစ်သမျှတိုင်းဟာ အမြဲမဆိုးနိုင်ပါဘူး။ အဆိုးထဲကကောင်းကို ရှာကြည့်ပါ။
တကယ်လို့ များ နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုတာ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီအခွင့်အရေးကို သင့်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အမိအရဖမ်းယူပါ။ အဲလိုလုပ်လိုက်လို့သင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေမယ်ဆိုလည်း လက်ခံလိုက်ပါ။
မြတ်စွာဘုရားက "ဘဝဆိုတာ လွယ်ကူတယ်"လို့ မဟောခဲ့ပါဘူး။ "မိမိကိုယ်ကိုသာ ကိုးကွယ်ရာ"လို့ ဟောခဲ့တာပါ။ အားထုတ်ရကြိုးနပ်တယ် လို့ ပဲဟောခဲ့တာပါ။
Posted by witch83 at 1:29 PM No comments:
Posted by witch83 at 5:41 PM No comments:
မှတ်ချက် ။ ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပို့ ပေးတဲ့ email ကိုသဘောကျလို့ post ပြန်တင်ထားတာပါ ....original writer ကိုတော့မသိပါဘူး ။ To Continue Reading
Posted by witch83 at 6:22 PM No comments:
"YOUR ATTEMPT MAY FAIL, BUT NEVER FAIL TO MAKE AN ATTEMPT." To Continue Reading
Posted by witch83 at 3:39 PM No comments:
Posted by witch83 at 1:53 PM No comments:
ဇော်ဂျီကို အမည်မဖော်လိုတဲ့ ပညာရှင် ငါးဦးက ၂၀၀၅လောက်မှာ အခြားသူများနဲ့ ဖိုက်တင်ပလေးပြီး လုပ်ခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းလည်း အသုံးပြုသူတွေ ထောက်ပြတဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ပြန်လည် ပြုပြင် ဖြည့်စွက်ပေးခဲ့ပြီး အသုံးပြုသူတွေကို ကူညီခဲ့ပါတယ်။ ဒါတင်မက ဇော်ဂျီကို ဘယ်သူမဆို ပိုကောင်းအောင် ပြုပြင်နိုင်တယ်ဆိုပြီး Source တွေကို ချပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဇော်ဂျီဟာ နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ တဟုန်ထိုး အောင်မြင်ခဲ့ပြီး အသုံးပြုသူ ယူဇာ အများအပြားကိုလည်း ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဇော်ဂျီကြောင့် မြန်မာအင်တာနက်လောက အခုအခြေအနေ ရောက်လာတယ် ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဇော်ဂျီ ဖန်တီးသူတွေနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ရင်းနှီးသိကျွမ်းလို့ ထောက်ခံတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ကြောင့် ရလာတဲ့ ရလဒ်တွေက ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ သက်သေအနေနဲ့ ရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း ကျွန်တော် သိနေတာမို့ အခုလို ဆုရတာကို ထိုက်တန်တယ်လို့ ဆိုတာပါ။ နောင်တချိန် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကသာ ဇော်ဂျီကို Language Pack တစ်ခုအနေနဲ့ သဘောထားပြီး လက်ခံခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဝင်းဒိုးစ် သုံးတာနဲ့ မြန်မာဖောင့် လွယ်လွယ်ကူကူ ရိုက်လို့ရတော့မှာပါ။ နောက်ဆုံး သတင်းများအရ ဇော်ဂျီအတွက် မတူညီတဲ့ ဖောင့်ပုံစံ သုံးခု အသစ်ထုတ်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဇော်ဂျီနဲ့ သက္ကတတွေ၊ ပါဠိတွေ၊ မွန်စာတွေ၊ ကရင်စာတွေကိုလည်း ရိုက်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။ To Continue Reading
အကြောင်းပြချက်တွေအမျိုးမျိုးပေးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကန့်သတ်နေတာဟာ မိမိကိုယ်ကိုယ် ပြန်နှိပ်စက်နေ သလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ To Continue Reading
Posted by witch83 at 12:54 PM 1 comment:
I am justanormal female who is having an ordinary life. I think I dont have many things to tell about me.
passed 10th Std exam in 2000 from St.Augustine (B.E.H.S(2)Kamayut);
Received B.C.Tech degree from UCSY in 2005 June (UCSY's 7th Graduation Ceremony);
Received M.C.Tech degree from UCSY in 2009 Feb, (UCSY's 11th Graduation Ceremony);
Worked @ Myanmar Teleport Co.,Ltd ( formerly known as BaganNet) as an ICT engineer (from 01 September 2007 to 30 June 2009)
Received second master degree from NTU in 2011.
Currenty working in Singapore asasupport engineer ataMNC ( 01 Jun 2011 to present).
In my leisure time, I love to read and write, listen to music, cook, watch movies, hang out with freinds, go shopping or takeanap. :)
My main aim in life is to succed in life inabalanced way
for visiting my blog and reading my posts (^_^)
Posted by witch83 at 5:57 PM No comments:
As I got this story fromaforward mail, I dont really know the original writer. But, I do appreciate with his/her idea and I want to share this with all of you ! To Continue Reading
Posted by witch83 at 4:11 PM5comments: